2011 အတွက် Listing တစ်ခု လုပ်ချင်လို့ပါ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » 2011 အတွက် Listing တစ်ခု လုပ်ချင်လို့ပါ
2011 အတွက် Listing တစ်ခု လုပ်ချင်လို့ပါ
Posted by မဟာရာဇာ အံစာတုံး on Jan 1, 2012 in Creative Writing, Think Different | 25 comments
2011 ခရစ်သက္ကရာဇ် ကုန်ဆုံးလို့ 2012 ကိုလည်း ရောက်ခဲ့ပြီ။ ဒါဖြင့် နှစ်ဟောင်း 2011 မှာ ဘာတွေများ ပြောစမှတ် ဖြစ်ခဲ့လဲ … ? ဘာတွေများ သမိုင်းဝင် ဖြစ်ခဲ့သလဲ … ? တစ်ကမ္ဘာလုံး အတိုင်းအတာ အနေနဲ့ ပြောရရင် အိုစမာဘင်လာဒင် ကို အသေဖမ်းမိခဲ့တာ။ အာရပ်နွေဦး တော်လှန်ရေး ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာ။ လစ်ဗျားနိုင်ငံမှာ ကဒါဖီ ကျဆုံးသွားခဲ့တာ။ ကျုပ်တို့ မြန်မာပြည်မှာလည်း ဒီမိုကရေစီ စနစ်ကို စတင် အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့တာ။ နည်းပညာ ရပ်ဝန်းထဲမှာတော့ Apple တည်ထောင်သူ စတိဂျော့စ် သေဆုံးသွားခဲ့တာ စသည်ဖြင့် … စသည်ဖြင့်ပေါ့။
2011 ခုနှစ်အတွင်း ကမ္ဘာကျော်ခဲ့တဲ့၊ သမိုင်းတွင် သမိုင်းဝင်သွားခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေ ရှိခဲ့သလို ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေးနေကြတဲ့ ကျုပ်တို့တွေမှာရော 2011 ခုနှစ်အတွင်း စိတ်ကျေနပ်စရာ ကောင်းလောက်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ သမိုင်းမှတ်တိုင် (ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင် မဟုတ်ပါ ) တစ်ခုကို စိုက်ထူနိုင်ခဲ့ကြပါသလား … ?
လူတိုင်းလူတိုင်းမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ 2011 ခုနှစ်အတွင်း ကိုယ့်အတွက် သမိုင်းတစ်ခု မဟုတ်တောင်မှ ကျေနပ်စရာ ကောင်းလောက်တဲ့၊ တစ်သက်တာအတွက် အမှတ်တရ ဖြစ်စေလောက်တဲ့ အဖြစ်အပျက်၊ အကြောင်းအရာတွေ ကိုယ်စီ ရှိကြမှာပါပဲ။
ဒါကြောင့် ဒီနေရာမှာ အကိုတို့၊ အမတို့၊ ညီငယ်၊ ညီမငယ်တို့ရဲ့ 2011 အတွင်း ကျေနပ်စရာ၊ အမှတ်ရစရာ အဖြစ်အပျက် အကြောင်းအရာတွေကို ဝင်ရောက် ရေးသားပေးကြဖို့ ကျွန်တော် အံစာတုံးက ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် ခင်ဗျ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Listing တစ်ခု လုပ်ချင်လို့ပါ။ အဲဒီ Listing လုပ်ပြီးသွားရင် ဒီနေရာမှာ Post တစ်ခုအနေနဲ့ တင်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Post ရဲ့ နာမည်ကိုတော့ ‘2011 အတွင်း ကိုယ့်သမိုင်း ကိုယ်ရေးခဲ့သူများ’ လို့ပဲ ပေးမိမယ် ထင်ပါတယ် ခင်ဗျာ။
ကျွန်တော် အံစာတုံး အနေနဲ့ ပြောရမယ်ဆိုရင် – လွန်ခဲ့တဲ့ (၂) နှစ်လောက်က Gmail, Gtalk, Account ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေ သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ ခေတ်စားနေပေမယ့် ကျွန်တော်မှာတော့ ဘာမှန်း မသိခဲ့လောက်အောင်ပဲ ‘အ’ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့ 2011 အတွင်းမှာတော့ ကိုစောစံ (http://sawsan23.com/) ရဲ့ ကျေးဇူးကြောင့် hosting, domain name, wordpress တွဲဖက်ပြီး ကိုယ်ပိုင် Blog တစ်ခု တည်ဆောက် နိုင်ခဲ့တဲ့အထိ တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒါကတော့ ကျွန်တော့်အတွက် 2011 ခုနှစ်အတွင်း IT ဘက်မှာ အားရလောက်တဲ့ တိုးတက်မှုတစ်ခုကို ရရှိခဲ့ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျမအနေနဲ့ကတော့ ၂၀၁၁ ရဲ့ နှစ်ဝက်လောက်မှာ ရွာထဲ ရောက်လာပြီးတော့ အသိအမြင်တွေ ဗဟုသုတတွေ ရခဲ့ပြီး စာမဖြစ်ပေမဖြစ်မတတ်တခေါက်များကို စာစီတတ်လာပြီး ကျမဘ၀ရဲ့ ပထမဆုံးစာစုလေးကို ဒီရွာမှာ ရေးဖြစ်ခဲ့တာရယ် ရွာကမိတ်ဆွေများနဲ့ ခင်မင်သိကျွမ်းခွင့်ခဲ့ရတာပါပဲ…..
ဒါလေးကတော့ ကျမရဲ့ ၂၀၁၁ အတွက် ထူးခြားမှုလေးပါပဲ
၂၀၁၁ မှာ ဒါ့ပုံဆြာ စဖြစ်လာတယ်ဗျ….
အောက်တိုဘာလောက်ကစလို့ ..ပိုစ့် ပေါင်း ၈၀လောက် ဂေဇက်ထဲမှာရေးဖြစ်ခဲ့သပေါ့ဗျာ…
မှတ်မှတ်ရရရှိနေမယ့် နှစ် ၁နှစ်ပါ
အူကြောင်ကြောင် စာတွေ ရေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ကျိန်းသေပေါက် လစဉ်ပုံမှန်ထွက်ငွေတစ်ခု ရရှိခဲ့ပါတယ်။
ချက်မယ် ပြုပ်မယ် ကြူမယ် ဖွမယ်
ရေးတယ် ကဗျာတွေ ရူးတယ် ထူးရှယ်
ဟတ်မယ် ဖျက်မယ် ဆိုးလာတယ်
ပြီးတော့မျက်လုံးက
ဂွမ်းတယ် ၈ွမ်းတယ် …………….
မှတ်မှတ်ရရ ၂၀၁၁ အစမှာ ဂေဇက်ရွာသူ ဖြစ်လာပြီး တသက်လုံးစိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ရတဲ့ စာရေးတဲ့သူ ဖြစ်လာဖို့ စပြီး အကောင်အထည်ဖော်ခွင့်ရတာ၊ ရွာကနေတဆင့် တခါမှတောင် မမြင်ဖူးပဲနဲ့ ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်တွေလို စိတ်ထဲမှာ ခံစားခဲ့ရတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ ရလာတာ၊ အခုနှစ်ကုန်ခါနီးမှာ လူ့လောကမှာ မှီဆိုတဲ့ ကျွန်မရှိခဲ့ပါလားလို့ သက်သေပြမဲ့ သက်သေခံလေး နောက်တယောက် ထပ်၇တာ ကျွန်မအတွက်တော့ အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ အမှတ်တရတွေပါပဲ။
မှတ်မှတ်ရရ 5.6.2011 မှာအင်တာနက်သင်တန်းကိုစတက်ဖြစ်ခဲ.တာပါ
၂၀၁၁ ရေ ဂွတ်ဘိုင်
၂၀၁၂ မှာ အပီလန်းမယ် ဗျာ
2011 မှာ မန်းဂေဇက်ကိုဘယ်လိုကနေဘယ်လိုရှာတွေ့မှန်းမသိပဲရောက်ခဲ့ရတာပါ။ မသိတာတွေအများ ကြီးသိလာရပြီး အကျိုးကျေးဇူးတွေအများကြီးရခဲ့ပါတယ်။ မန်းဂေဇက်တရက် မဖတ်ရရင်မနေနိုင်တော့တာ 2011 ရဲ့အမှတ်တရပါ။
မကျေနပ်တဲ့ကောင်ကို ကီးဘုတ်နဲ့ ကောင်းကောင်းဆဲတတ်သွားဘီ
၂၀၁၁၊၉လပိုင်း၊၃ ရက်နေ့၎လုံးထီ ဆုသေးတစ်ဆု ပေါက်တယ်။
အဲဒီနေ့ မှာပဲ ဟိုင်းလပ်ကားနဲ့ တောင်ပေါ်ကမောင်းဆင်းရင်း ဘရိတ်ပေါက်
ကားရော လူပါ တစ်ပတ်ဂျွမ်းထိုးလိုက်တယ်။
၂၀၁၁ ရဲ့ ဒီဇင်ဘာနောက်ဆုံး ၃၁ ရက်နေ့ မှာ ဒီရွာထဲ ပိုစ်လေးတစ်ခု
၂၀၁၁ ကုန်ခါနီး တစ်ဖက်သတ် အပုတ်ချ နေတဲ့ အကြောင်းလေးတစ်ခု ကို ရင်ဖွင့်ချင်လို့ ဂေဇက်ကို ဝင်ခဲ့တယ်။
ပထမ က “အပျော်ကြံ” တာပါ။ အတည်တကျ နေဖို့ အစီအစဉ် မရှိပါဘူး။
ဒါပေမဲ့ ရွာထဲကို လည် ကြည့်လိုက်တော့ အရမ်းကိုဘဲ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ရွာသူ/သား တွေကို တွေ့ခဲ့တယ်။
အတိတ်ရေစက် ပါလို့လားမသိ။ တစ်ချို့ ဆို မမြင်ဘူးဘဲ၊ သူဘယ်သူမှန်းကို မသိဘဲ ရက်တိုတို လေးအတွင်း ခင်သွားမိတယ်။
ဒါနဲ့ဘဲ ကျွန်မ ရွာမှာ အခြေချ ဖြစ်သွားပါတယ်။
– သူများကိုလဲ ဆရာလုပ်ချင်၊ ကိုယ်လဲကောင်းကောင်း မသိတော့ စာပိုဖတ်ဖြစ်လာတယ်။
– မိတ်ဆွေ တွေတိုးလာတယ်။ သူတို့ ဆီက ဗဟုသုတတွေ အများကြီး ရလာတယ်။
– Facebook နဲ့ အခြား Website တွေ ကို မသုံးဖြစ်တော့ သလောက်ဖြစ်လာတယ်။
ဒီတော့ကာ ….. လက်ရှိမှာတော့
သူကြီးက ရွာက နှင်ထုတ်ရင်တောင်မှ သူ့ကို မိုက်ကြေး(ဆက်ကြေး) ပေးပြီး နေဖို့ ဆုံးဖြတ်ထားပါ၏။
ဒီလို Listing လုပ်ပေးတာ ကျေးဇူးပါဘဲ – ခြောက်မျက်နှာ ရေ ( Oppps … sorry) အန်စာတုန်း ရေ :-)
* ဂေဇတ်ထဲ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့တယ်…
* ပို့စ်တွေ မတောက်တခေါက်စရေးခဲ့တယ်…
* facebook သုံးခြင်းကို စွန့်လွှတ်ခဲ့တယ်…
* ကိုယ့်ခြေထောက်ပေါ်ကိုယ်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ ခြေလှမ်းတွေ စလှမ်းခဲ့တယ်…
မနှစ်ကကျုပ် ဒီနှစ်ငါက အနိုင်ရခဲ့
နောင်အစဉ်နှစ်တို့ ဖြစ်စေ…။ ။
သေချာတာကတော့ မနှစ်ကထက် ဒီနှစ်အသက် ၁နှစ်ကြီးသွားတယ်ဆိုတာပဲ
2011 အတွင်းမှာ စာရေးသူထက် လက်ဆော့သူအဖြစ်ပိုပြီးရွာထဲက အသိများပါတယ်။
နဂိုရ်အခံရှိတဲ့ဓါတ်ပုံ ပိုး ပိုရင့်သွားတဲ့နှစ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။
ကျန်တဲ့ဆိုက်တွေမှာ တော့ စာဘဲရေးတယ် ဓါတ်ပုံမတင်ပါ။
2011 ထဲမှာ လူကြိုက်အများဆုံးလို့ ထင်ရတာကတော့
(3) တစ်စေ့တစ်ဆုပ် တစ်မူတ်တစ်ခွက်( shade journal တွင်ပုံနှိပ်ပြီး)
(5)ထမီချွတ်၏ မချွတ်၏ ( shade journal တွင်ပုံနှိပ်ပြီး)
ဒီပိုစ်လေးက ဆိုက်ပေါင်းစုံမှာလူကြိုက်များခဲ့ပါတယ် စုစုပေါင်း ၀င်ကြည့်သူအရေအတွက်
လက်သီးပုန်းအနီ တူညီခြင်းအစိမ်း …………………ပိုစ်ပါဘဲ။
လက်မအောက်စိုက်တာ 8ခုတိတိလက်ခံရပြီး ကျနော်အတွက်ပေးသမျှကော်မင်းအားလုံးလောက်
တစ်နှစ်လုံးရေးတဲ့အထဲမှာ လူမုန်းအများဆုံးပိုစ်လို့ ကျနော်က မှတ်တမ်းတင်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် 2010ခုနှစ်မေလက စလို့ အခုအချိန်အထိ ရွာထဲမှာနေရ တာကိုလုံးဝကျေနပ်နှစ်သက်ပါတယ်။
ပိုထူးခြားတယ်လို့ပြောရရင် 2011 ခုနှစ်အတွင်းမှာ ရွာသူရွာသားအတော်များများနဲ့ ရန်ကုန်မှာရော မန်းလေးမှာပါ လူချင်းခင်မင်ရင်းနှီးခွင့်ရပါတယ်။
မန်းလေးမှာ (ပေါက်ပေပု) အသင်းဖွဲ့စည်းပြီးပါကြောင်း။
မတူအောင် ရေးခဲ့တယ်နော့ …
ကျွန်တော် ကဒီနှစ်ဦးပိုင်းကမှ ရွာထဲဝင်လာတာပါ။ ၀င်ဝင်ချင်း nigimi77 နဲ့ မိုးပြာနဲ့ ချဲရသေးတယ်။ ကျွန်တော်မန့်ရင်တော့ လူကိုသိပ်မကြည့်ဘူး။ ချဲပေမဲ့လည်း nigimi77 ရဲ့ သူတို့ဆီကအမဲဂိုဏ်းများ ပိုစ့်မှာ မန့်သူတယောက်မှ မရှိပေမဲ့ ရေးတာကြိုက်လို့ ၀င်မန့်ခဲ့တယ်။ ခုတော့လည်းရွာထဲမှာ သူကြီးကအစ ရွာသားအားလုံး ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ ပျော်စရာကောင်းပါတယ်။
၂၀၁၁ မှာမှဘားဂလစ်စပြီးသုံးတတ်လာလို့ ပျော်လို့မဆုံးပါ
ရှူံးနိမ့်မှုများနဲ့.. လူ ဖြစ်နေဆဲပဲ။
အော်….၂၀၁၁မှာ မန်းတလေးဂေဇက်ကနေ စာရေးဖို့ တွန်းအားပေးတဲ့အခွင့်လေးတစ်ခုရခဲ့ပါပီ။
ရေးတတ်ဖို့ နဲ့ အတွေးကောင်းတွေရဖို့ လေ့ကျင့်နေရဆဲပါဗျာ။
2010 ထဲမှာ မိတ်ဆွေတစ်ယောက် forward လုပ်တဲ့ ရတနာနတ်မယ် အကြောင်း post လေး ဖတ်မိရာက မန်းဂေဇက်ဆိုတာသိလာပါတယ်။
၂၀၁၁ ဇန်န၀ါရီထဲမှာ သူငယ်ချင်းမမရဲ့ လမ်းညွှန်မှုခံယူပြီး member ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
၂၀၁၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၃ရက်မှာ မြူနှင်းမှုန်မှုန်ရွှေတိဂုံ ဆိုပြီး ကိုယ်လက်ဆော့ထားတဲ့ မှုန်ဝါးဝါးဒါ့ပုံ ကိုယ့်ဖာသာ အဟုတ်ထင်ပြီး post တစ်ခုစတင်ခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးမန့်တာကတော့ ဆူးပါဘဲ။
သူကြီးနဲ့ ရွာသူရွာသားတွေ လက်တွဲခေါ်လို့ ရွာထဲကို တစ်လှမ်းပြီးတစ်လှမ်း ၀င်လာမိပါတယ်။
ဇော်ဂျီနဲ့ မြန်မာ font ကိုလည်း အဲဒီတော့မှ စမ်းတ၀ါးဝါးစသုံးကြည့်ပြီး ကြိုက်သွားပါတယ်။
စိတ်ထဲကနာကျည်းချက်လေး ပေါက်ကွဲမိတဲ့ နိုင်ငံကိုတစ်ကယ်မချစ်လို့ စွန့်ရစ်လေရော့သလား ကို ၂၀၁၁ သြဂုတ်လ ၁၅ရက်မှာ တင်ခဲ့တာကို အားပေးခဲ့ကြတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ငယ်ငယ်ကရူးခဲ့ရတဲ့ စာရေးဆရာဘ၀ရတော့မလားတောင် စိတ်ကြီးဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဦးကြောင်ကြီးကလည်း မြှောက်မြှောက်ပေးတယ်လေ။
၂၀၁၁ ဇူလိုင် ၂ ရက် ကိုပေါက် ရန်ကုန်လာတာကစလို့ ရွာသူရွာသားတွေကို မျက်ဝါးထင်ထင်သိခဲ့ရတာ
ငယ်ပေါင်းကြီးဖော်တွေလို ခင်ခဲ့ရတာ ၀မ်းသာမဆုံးပါဘဲ။
လိုရင်းချုပ်ရရင်တော့ ၂၀၁၁ ဟာ မန်းဂေဇက်၊ဇော်ဂျီ၊ရွာသူရွာသားများ စတဲ့ မိတ်သစ်မိတ်ကောင်းများနဲ့ပေါင်းဆုံရတဲ့နှစ်ဖြစ်လို့ အထူးခြားဆုံးနှစ်လို့ ပြောပါရစေ အန်စာတုံးရေ။
2011 နှစ်ကတော့ ကိုယ့်အတွက် မရေရာမသေချာနေသောနှစ်၊ ဖောက်ထွက်၍ မရသေးသောနှစ်ဖြစ်နေတုန်းပါ။ ၂၀၁၂ အတွက် ကို တိကျရှင်းလင်းသောနှစ်(ကိုယ့်အတွက်) ဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းရင်း….
ပုဂံဘုရားဖူး (၅)ခေါက်မြောက်။ လကုန်ခါနီးမှာပဲ စာသင်နေတုန်း
နောက်ဖေးကပ်ရက်အိမ်မီးလောင်၍ သေကောင်ပေါင်းလဲ ပြေးရ။
ဖခင်သဖွယ်လေးစားရသော ဆရာကြီးတစ်ဦးကွယ်လွန်၊ နာရေးလိုက်ပို့ရင်း
မြောက်ဦးဆရာတော်တရားစခန်းဝင်ပြီး ဆရာတော်ရဲ့  မြောက်ဦးပညာရေး
ကျီးပေါင်းမသက်သာ၍ တိုင်းရင်ဆေး အပ်စိုက်ကု။ မြန်မာတိုင်းရင်းဆေးကို အထင်
၂၀၁၁ မေ (မထူးခြား)
မန္တလေးဈေးချိုနားဗုံးပေါက်၍ ချောက်ချားမိ။
မန္တလေး ပညာရေးကောလိပ် ဆရာဆရာမများ အတွက် English Proficiency Course
တစ်ခု မေတ္တာဖြင့် သွားရောက်ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးခဲ့။
ချစ်တပည့် (Pooch) က သူရေးထားတာလေးတွေ ဖတ်စေချင်လို့ ဖိတ်တာနဲ့
MG ရွာထဲသို့ ရောက်ခဲ့။ မြန်မာလို သိပ်မရသေးလို့ ဘိုလိုရိုက်မိရာ တစ်စုံတစ်ယောက်၏
အကောခံခဲ့ရ။ (အမည်မဖော်ပြချင်ပါ)( ထို Comment ကို သိမ်းထားပါသည်။)
ရွာထဲဆက်နေရကောင်းမလား၊ ပြန်ရကောင်းမလား တွေးခဲ့မိသေး။
အိုလို့နာခဲ့ပြီ။ သွားနှုတ်ရတယ်။ ဝါးစရာသိပ်မရှိတော့ဘူးပေါ့။
သီတင်းကျွတ်မို့လို့ ဆရာမအိုကြီးကို လာကန်တော့ကြတဲ့ ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေ
နဲ့ အမေ့အိမ် လူစည်နေလေရဲ့ ။
မန္တလေးရှိ ဂဇက်ရွာသားများဖြစ်ကြတဲ့ မောင်ပေါက်၊ မောင်ဝင်းထောလခါ၊ Pooch တို့
အိမ်အလည်လာကြပြီး စကားဝိုင်းတစ်ဝိုင်းဖြစ် ခင်မင်မှုတွေ သိုင်းရစ်ခဲ့ကြ။
ဦးသုနန္ဒ တရားစခန်းဝင်။ နိဗဒ္ဓစုဗူး (တစ်နှစ်လုံး စုရန်ကြို ယူထား) ဖောက်ရာ (၂)သိန်းလှူနှိုင်ခဲ့။
နေ့တိုင်းနည်းနည်းချင်းစုငွေဖြစ်လို့ ပို ဝမ်းသာရ။
MG မှာ တော်တော်ရေးလာပြီ၊ အခြားနေရာလေးတွေမှာရေးရင်း…ရေးရင်း…
I have been surfing the internet when 2012 comes in.